Tonometry (မျက်လုံးတွင်းဖိအားတိုင်းတာခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ » Tonometry (မျက်လုံးတွင်းဖိအားတိုင်းတာခြင်း)
Tonometry (မျက်လုံးတွင်းဖိအားတိုင်းတာခြင်း) ကဘာလဲ။
Tonometry ဟာ မျက်လုံးအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖိအား (intraocular pressure IOP) ကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုကို ရေတိမ်စစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ရေတိမ်ဟာ မျက်လုံးနောက်ဘက်အာရုံကြော ထိခိုက်မိပြီး မျက်စိကွယ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအာရုံကြော (Optic nerve) ကို ထိခိုက်မိခြင်းဟာ မျက်လုံးထဲက အရည်တွေ အပြင်ကို ကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် အရည်စုပြုံခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Tonometry ဟာ မျက်ကြည်လွှာမှ ဖိအားကို ခံနိုင်မှု ကို တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် မျက်လုံးတွင်းဖိအား (IOP) ကို တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးကို ထုံသွားအောင် မျက်စဉ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
• Applanation (Goldmann) tonometry – ဒီနည်းလမ်းကတော့ မျက်လုံးဖိအားကို တိုင်းတာဖို့ မျက်ကြည်လွှာ ကို ဖြည်းညင်းစွာ ပြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး မျက်လုံးကိုကြည့်ဖို့ slit lamp မိုက်ခရိုစကုပ် ကို အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖိအားကို မျက်ကြည်လွှာ ကို ပြားအောင်ဖိဖို့ ဘယ်လောက် အားသုံးဖို့လိုသလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အလွန်တိကျပြီး ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုတစ်ခု (ဥပမာ air-puff tonometry) က IOP တက်နေတယ်လို့ ဖေါ်ပြရင် အသုံးပြုပါတယ်။
• Electronic indentation tonometry – ဒီနည်းကို IOP တက်တာကို စစ်ဆေးဖို့ ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါဟာ အလွန်တိကျပေမယ့် Electronic indentation tonometry ဟာ Applanation (Goldmann) tonometry နဲ့ မတူညီတဲ့ အဖြေတွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က ဘောပင်နဲ့တူတဲ့ ကိရိယာရဲ့ လုံးဝန်းတဲ့ ထိပ်ဖျားလေးကို မျက်ကြည်လွှာ ပေါ်မှာ ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ IOP အဖြေကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
• Noncontact tonometry (pneumotonometry) – Noncontact (or air-puff) ဟာ သင့်မျက်လုံးကိုထိမှာမဟုတ်ပဲ မျက်ကြည်လွှာ ကို ပြားစေဖို့ လေကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ IOP ကိုတိုင်းတာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို IOP များခြင်းကို တိုင်းတာဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းတစ်ခု အဖြစ်အသုံးပြုကြပြီး ကလေးငယ်တွေမှာ တိုင်းတာဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ ထုံစေတဲ့ မျက်စဉ်းတွေကို အသုံးမပြုပါဘူး။
Tonometry တွေကို ဘာကြောင့် လုပ်ကြတာလဲ။
သင့်ဆရာဝန်က သင့်မှာ ရေတိမ်ဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းများတယ်လို့ သံသယရှိရင် Goldman applanation tonometry test ကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ air puff test သို့ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ပြဿနာကို ဖေါ်ပြနိုင်ပေမယ့် ဆရာဝန်က သင့်ကို ရေတိမ်ရှိမရှိ သေချာစေဖို့ tonometry လုပ်ခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ အခြားလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဘေးဘောင်အမြင်တွေ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ဆုံးလာခြင်း၊ ပြင်းထန်သော မျက်လုံးနာခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်း၊ အလင်းတွေမြင်ရခြင်းနဲ့ မျက်လုံးနီခြင်းတွေ ဖြစ်လာရင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေဟာ ရေတိမ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Tonometry ကိုမလုပ်ခင် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ။
Tonometry tests တွေကို ရေတိမ်စစ်ဆေးဖို့ လပေါင်းများစွာ (သို့) နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ IOP ဟာ တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ အချိန်အမျိုးမျိုးမှာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူဟာ ရေတိမ်ကို စစ်ဆေးဖို့တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ IOP မြင့်နေတယ်ဆိုရင် အခြားစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ ophthalmoscopy၊ gonioscopy, နဲ့ visual field testing တွေကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Tonometry တွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်သလဲ။
စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်ခင် မျက်ကပ်မှန်တွေကို ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ ဆိုးဆေးတွေ ဟာ သင့်မျက်ကပ်မှန်တွေကို အရောင်ဆိုးနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာအရင်က မျက်ကြည်လွှာအနာ သို့ မျက်လုံးရောဂါပိုးဝင်ခဲ့ဖူးရင် (သို့) မိသားစုအတွင်း ရေတိမ်ဖြစ်သူရှိရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေအကြောင်းကိုလည်း ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
Tonometry နဲ့ စစ်ဆေးနေချိန်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်မှာလဲ။
Tonometry ဟာ ပြုလုပ်ဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
• Applanation (Goldmann) နည်းလမ်း
ဒီနည်းလမ်းကို မျက်စိအထူးကုဆရာဝန် (သို့) မျက်စိကျွမ်းကျင်သူက ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က မျက်လုံးအပေါ်ယံထုံသွားအောင် မျက်စဉ်းကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စစ်ဆေးစဉ်မှာ tonometer ကို မခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ fluorescein ဆိုတဲ့ ဆိုးဆေး ပါဝင်တဲ့ စက္ကူနဲ့ မျက်လုံးကို ထိလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးဆေး ပါဝင်တဲ့ မျက်စဉ်းကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dye ဟာ သင့်ဆရာဝန်ကို မျက်ကြည်လွှာ ကိုကောင်းစွာ မြင်ရစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မေးစေ့ကို အောက်ခံအပြားပေါ်မှာ တင်ထားပြီး ရှေ့တည့်တည့်က slit lamp မိုက်ခရိုစကုပ် ကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ရှေ့မှာထိုင်နေမှာဖြစ်ပြီး တောက်ပတဲ့အလင်းကို မျက်လုံးထဲထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဟာ tonometer probe နဲ့ မျက်လုံးကို ထိလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဟာ IOP တိုင်းတာတဲ့ tonometer ရဲ့ tension dial ကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထုံဆေးမပြယ်မချင်း မျက်လုံးကို မိနစ်၃၀လောက် ကြာသည်အထိ မပွတ်သင့်ပါဘူး။
• Electronic indentation နည်းလမ်း
Electronic indentation method မျက်စိအထူးကုဆရာဝန် (သို့) မျက်စိကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် က ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က မျက်လုံးအပေါ်ယံထုံသွားအောင် မျက်စဉ်းကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စစ်ဆေးစဉ်မှာ tonometer ကို မခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အရှေ့တည့်တည့်ကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ အောက်ကိုကြည့်ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဟာ tonometer probe ကို သင့်မျက်လုံးကို ညင်သာစွာ ထိလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးတစ်ဖက်အတွက် အဖြေ မြောက်မြားစွာကို ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေတစ်ခါဖတ်နေစဉ်မှာ အသံ တစ်ကြိမ်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့အဖြေတွေ အလုံအလောက်ရရှိပြီဆိုရင်တော့ အသံမြည်လာပြီး IOP တိုင်းတာတဲ့ ပျမ်းမျှအဖြေဟာ ကိရိယာရဲ့ ဖန်သားပြင် မှာ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံဆေးမပြယ်မချင်း မျက်လုံးကို မိနစ်၃၀လောက် ကြာသည်အထိ မပွတ်သင့်ပါဘူး။
• Noncontact (or air-puff) နည်းလမ်း
ဒီနည်းလမ်းကို မျက်စိအထူးကုဆရာဝန် (သို့) မျက်စိကျွမ်းကျင်သူက ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအတွက် ထုံစေဖို့ မျက်စဉ်းမလိုအပ်ပါဘူး။ မေးစေ့ကို အောက်ခံအပြား ပေါ်မှာ တင်ထားပြီး ရှေ့တည့်တည့်က slit lamp မိုက်ခရိုစကုပ် ကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေရုတ်တရက် သင့်မျက်လုံးကို မှုတ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတ်ယ။ လေသံကို ကြားရမှာဖြစ်ပြီး မျက်လုံးမှာ အေးမြခြင်း (သို့) ဖိအားအနည်းငယ်ကို ခံစားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ tonometer ဟာ လေကြောင့် ချိုင့်သွားတဲ့ မျက်ကြည်လွှာ ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေမှတစ်ဆင့် IOP ကို တိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုကို မျက်စိတစ်ဖက်အတွက် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Tonometry လုပ်ပြီးသွားချိန် ဘာဖြစ်မှာလဲ။
မျက်ကြည်လွှာ မှာ ကုတ်ခြစ်ထားတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ရက်အတွင်း ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူအချို့ဟာ tonometer မျက်လုံးကို ထိဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာ ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်။ air-puff tonometry မှာတော့ လေကသာ မျက်လုံးကို ထိမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စစ်ဆေးမှုပြုနေစဉ် (သို့) စစ်ဆေးမှုအပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ မျက်လုံးနာတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ပုံမှန် IOP ဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကွာခြားမှုရှိပြီး အိပ်ရာနိုးတဲ့အချိန်မှာ မြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ IOP ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ရေတိမ်ရှိသူတွေမှာ ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက် IOP ပိုများနိုင်ပြီး အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်း IOP တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန် :10–21 millimeters of mercury (mm Hg)
ပုံမှန်မဟုတ် : 21 mm Hg အထက်
IOP များခြင်း: IOP များခြင်းဟာ သင့်မှာ ရေတိမ်ဖြစ်နေခြင်း (သို့) ရေတိမ်ဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းများခြင်းတွေကို ဖေါ်ပြပါတယ်။ IOP 27mmHG ထက် ဆက်တိုက်ပိုပြီး များနေသူတွေဟာ တကယ်လို့ IOP ကျစေတဲ့ ဆေးအသုံးမပြုရင် ရေတိမ်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ IOP 21 mmHg ထက်များပြီး မျက်စိအာရုံကြော ပျက်စီးမှု မရှိသူတွေကိုတော့ မျက်စိတွင်းဖိအားများခြင်း (ocular hypertension) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေမှာ အချိန်ကြာလာရင် ရေတိမ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းနဲ့ ဆေးရုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး Tonometry ရဲ့ အဖြေတွေဟာ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိလိုတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Tonometry နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် ညွှန်ကြားချက်တွေကို ပိုမိုနားလည်စေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Tonometry http://www.webmd.com/eye-health/tonometry?print=true. Accessed July 5, 2016.
Tonometry Test http://www.healthline.com/health/tonometry#Procedure4. Accessed July 5, 2016.
Tonometry https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003447.htm. Accessed July 5, 2016.
Laparoscopic Gastric Bypass (အစာအိမ်တွင်း မှန်ပြောင်းထည့်အစာချေရည်လမ်းလွှဲခွဲစိတ်ခြင်း)